Pride Zita Rekuzivikanwa - Dhizaini magazini
Zita Rekuzivikanwa Kugadzira dhizaini yemhando Pride, timu yakashandisa kuongorora kwevateereri munzira munzira dzinoverengeka. Iyo timu payakagadzira dhizaini uye kuzivikanwa kwemakambani, zvakafunga mumirangariro yeiyo psycho-geometry - pesvedzero yemafomu ejometri pane mamwe psycho-marudzi evanhu uye yavo sarudzo. Zvakare, dhizaini yacho yaifanirwa kunge yakakonzera mamwe manzwiro pakati pevateereri. Kuti uwane mhedzisiro yaunoda, timu yakashandisa mitemo yemhedzisiro yemuvara pane munhu. pane zvese, mhedzisiro yakapesvedzera magadzirirwo ezvigadzirwa zvese zvekambani.
Zita rechirongwa : Pride, Vagadziri zita : Oleksii Chernov, Izita remutengi : PRIDE.
Zita Rekuzivikanwa Oleksii Chernov Pride